Parables के हुन् र तिनीहरूले के हो
आगो - एक ज्वरो - "अर्को नजिक र झुलसे भाग उड्यो यो ज्योति हो मलाई तपाईंले तीन पुतलीहरु, के आगो थाहा चाहन्थे जो को कहानी बताउन तिनीहरूलाई को पहिलो सुरक्षित दूरी मा उहाँलाई नजिक र फिर्ता आए र आगो कि रिपोर्ट गरौं।।।" "- उनले तेस्रो पुतली सही अप उड्यो र त्यो -... थाह छैन यो के थियो थाह थियो तर म एक चिन्ने, मौन छ, र भन्छ गर्ने एक बताउन कुनै यो बताउन सकिएन, सधैंभरि अब flames मा गायब भन्नुभयो" - यो बिन्दु सामान्यतया पज लटकी मा, र दर्शक मनन गर्न मौका दिइएको छ घ बताए।
के तपाईं कहानी को साहित्यिक विधा कुन सम्बन्धित गर्न, लाग्छ? निस्सन्देह, यो एक दृष्टान्त छ। यो अर्थ को छ - यो allegorically हामीलाई बुद्धि, नैतिक वा धार्मिक निर्देशन एक प्रकारको conveys जो छोटो instructive कथा छ।
एक दृष्टान्त के हो
का अझ राम्ररी यो अवधारणा जाँचौं। शब्द "दृष्टान्त" को lexical अर्थ साहित्यिक घटना को सार कब्जा। पहिलो, हामी पहिले नै थाह छ, यो कथा लामो हुन सक्दैन। यो यस्तो छोटो कथा जस्तै कार्य को विस्तृत वर्णन, वर्णहरू को वर्ण र कहानी, छैन। साथै, छोटो कथा विपरीत, एक दृष्टान्त सधैं नैतिक समाप्त छ। घटनाहरू painting छैन र पृष्ठभूमि, वा मुख्य विचार गठन गर्नुपर्छ जो देखि रेशमको कोयो एक प्रकारको, रूपमा उल्लेख छन्।
त्यसैले एक दृष्टान्त के हो? यो नैतिक शिक्षा, हामी प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास लागि आज शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ रूपमा, एक मनोरंजक तरिकामा ढाकिएको। पुतलीहरु बारेमा कम्तिमा एक कहानी प्राप्त गर्नुहोस्। हामी सिर्फ पछिल्लो वाक्य भन्नुभयो भने, हामी धेरै कम यसको अर्थ सम्झना, शायद बुझे छन्। तर हाम्रो टाउको मा सुन्दर र स्पष्ट इतिहास पहेली धन्यवाद सेकेन्ड कुरा विकास हुनेछ, र हामी पूर्णतया हामी व्यक्त गर्न प्रयास गरेका थिए भन्ने विचार बुझ्न। यस मामला मा, कथा अन्त यसको अर्थ को एक विवरण दिइएको छ, तर यो सधैं हुँदैन। केही Parables अन्तिम पृष्ठमा "सही प्रतिक्रिया" दिन छैन, र त्यसपछि सबैलाई तिनीहरूलाई अलग व्याख्या।
को Parables के हुन्
यो विधा विभिन्न धार्मिक र दार्शनिक शिक्षा द्वारा पुरातन समयका देखि प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले, त्यहाँ, दार्शनिक प्राच्य, Confucian सुफी, मसीही Parables छन्। र यो तिनीहरूलाई एक exhaustive सूची छैन। यहाँ प्रसिद्ध सम्झन गर्न उपयुक्त छ प्रार्य गठन toasts, अक्सर र किन सम्म उर्वर पहाड दायरा बाहिर दृष्टान्त फारम, मा couched जुन।
हामी धेरै नाम सुनेका, तर वास्तवमा के थाहा छैन "सुलेमानको हितोपदेश।" यो पुरानो नियमका जसको लेखक इजरायल, सुलेमान राजा थियो, को पुस्तकहरू मध्ये एक हो। यसलाई आफ्नो ज्ञान को बुद्धि र परमेश्वरको देखि प्राप्त गरेको छ भनेर भन्छन्। एक दिन सुलेमानले तिनीहरूलाई साझेदारी गर्ने निर्णय, र "कुरा" तीन हजार हितोपदेश। तिनीहरूलाई केही बाइबल मा 20 औं पुस्तक को रूप मा आए (पुरानो नियमको) र क्लासिक अर्थमा मा Parables भन्दा धार्मिक र नैतिक विषयवस्तुहरू थप वचनहरू र शिक्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक दृष्टान्त किनभने के हो? तपाईं पहिले नै केही निष्कर्षमा हामीलाई नेतृत्व गर्ने, allegorical कथाहरू थाहा जस्तो छ। पुस्तक पनि सुलेमानले आफूलाई मा नैतिकता छ जो प्रत्यक्ष बयान र सल्लाह सामेल छन्।
एकदम फरक Parables मा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नयाँ नियममा वा सुसमाचारको। व्याख्या को समयमा दैनिक जीवन वा वास्तविकता तिनीहरूलाई वरिपरि को सरल कथा, एक गहिरो नैतिक अर्थमा लिनु परमेश्वरको कि व्यक्तिको आध्यात्मिक बाटो संकेत गर्छ।
दृष्टान्तमा याद "उडन्ता छोरा बारेमा।" मेरो बुबा दुई छोराहरू थिए। वरिष्ठ लगनशील भई आफ्नो बुबा संग काम गरे। जवान भएको उत्तराधिकार आफ्नो शेयर आग्रह र तीर्थ गयो र एक निष्क्रिय जीवन नेतृत्व। पैसा बाहिर भाग्यो पछि, र सबै भन्दा menial जब विफलता मा समाप्त फेला पार्न प्रयासहरू, छोरा पश्चात्ताप घर फर्के। उहाँले सपना देख्यो मात्र कुरा आफ्नो बुबा क्षमा प्राप्त र उसलाई एक laborer रूपमा भाडामा छ। उहाँले खुला हतियार र सम्मान साथ अभिवादन गर्दा आफ्नो आश्चर्य र आनन्द कल्पना गर्नुहोस्। को जेठो छोरा आहत थियो र उहाँले त्यस्तो आनन्द संग दुष्ट पूरा आफ्ना पिता निन्दा - आफ्नो बुबाको विश्वासी र मेहनती छोरा - पहिले देखेका कहिल्यै। उहाँले जवाफ बारेमा प्राप्त: "तपाईंले सधैं यहाँ गरिएको छ। सबै मेरो - तपाइँको। र म आफ्नो भाइ मरेको थियो र अब फेरि जीवित छ, हराएको थियो र पाइन्छ खुसी छु। " यो दृष्टान्तमा व्याख्या केही, तर तिनीहरू सबै एउटा कुरा मा सहमत: पिता - परमेश्वर हुनुहुन्छ। भाइहरूलाई बारेमा केही विकल्प छन्। एक धार्मिक मानिस, जूनियर - -, तिनीहरूलाई को एक दाजु अनुसार penitent। त्यहाँ दाइ अन्तर्गत परमेश्वरले छान्नुभएको यहूदी मानिसहरूले बुझे कि एक संस्करण, र जुनियर अन्तर्गत छ - अन्यजातिहरू खोजी र परमेश्वरको अनुग्रहको प्राप्त।
जो Sufis को प्रश्न मा, त्यसैले सजिलो छैन एक निश्चित जवाफ दिन। यो धार्मिक सिद्धान्त, इस्लाम को शाखा को रूपमा पहिचान तथापि, उहाँलाई के गर्न साना छन्। सत्य वा परमेश्वर, जो एक र उस्तै बाटो खोजिरहेका, अनन्त wanderers - वाहक सुफी worldview dervishes थिए। उहाँले, सत्य एक तरिका देख छ भने आध्यात्मिक नवीकरण गर्न एक व्यक्ति, एक सुफी सकिन्छ र सुधार प्रणाली थियो जो छ। शेख अबू Bakr अल-Shibli - यो सिद्धान्तलाई सबैभन्दा प्रमुख अनुयायीहरूलाई को एक शब्दहरू - "एक सुफी हुँदा तपाईंले पहिले संसारमा देखा थिए के हुन, छ"। हामी आफ्नो अद्भुत Parables, बुद्धि र प्रेमले भरिएको साथ familiarity मार्फत Sufism को समझ स्पर्श गर्ने मौका छ।
अब, हामी के तिनीहरूले के हुन् लागि दृष्टान्त गठन, तपाईंलाई थाहा र कसले तिनीहरूलाई यस्तो लेखे। तर यो विचार र तिनीहरूलाई आफैलाई पढ्न आवश्यकता महसुस गर्न आफ्नो क्षमता मा यो विधा को जादुई प्रभाव अनुभव गर्न के साँच्चै बुझ्न क्रममा।
"द माइनर": अभिनेता, वर्णन र कैरेक्टराइजेशन
पौराणिक कथा - यो एउटा मौखिक narrative छ
"गुप्त मानिस" Platonov: कहानी को एक सारांश
प्राचीन एशिया को इतिहास
बिरालोहरु लागि Antitsarapki: निर्देशन र प्रतिक्रिया। Antitsarapki बिरालो: आकार
"Bifidumbacterin गुण": निर्देशन, सङ्केत गर्छ र contraindications
रेल को प्रकार। त्यो दोस्रो वर्ग कार मा एक श्रेणी फा मतलब?
Brondirovanie छोटो कपाल मा: प्रक्रिया को वर्णन, चरण निर्देशनहरूको र सिफारिसहरू द्वारा चरण
पेन्सन "तातियाना" Koblevo: तस्बिर र समीक्षा
नियाग्रा समूह - इतिहास र रचनात्मकता को सुविधाहरू
कम्प्युटर मा हार्ड ड्राइभमा खुर किन छ?
आधार र superstructure - यो के हो?
माछा घर। जलजीवालय माछा, अनुकूलता र सामग्रीको प्रकार